(trg)="1"> Ịtọrọ Mmadụ — Achụmnta Ego Zuru Ụwa Ọnụ
(trg)="2"> N’IME afọ iri gara aga , ịtọrọ mmadụ amụbawo nke ukwuu gburugburu ụwa .
(trg)="3"> Otu akụkọ na - ekwu na n’agbata afọ 1968 na 1982 , e jichiri ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu puku mmadụ na mba 73 .
(trg)="4"> Ma ná ngwụsị afọ ndị 1990 , kwa afọ a tọọrọ ihe e mere atụmatụ ya ịbụ malite na mmadụ 20,000 ruo 30,000 .
(trg)="5"> Ịtọrọ mmadụ bụ mpụ yiri ka ọ na - ewuru ndị omempụ n’ụwa nile site na Russia ruo Philippines , n’ihi na e nwere ndị ntọ dị njikere ịnwụde ihe ọ bụla na - agagharị agagharị .
(trg)="6"> N’otu oge , a tọọrọ nwa ọhụrụ dị nanị otu ụbọchị .
(trg)="7"> Na Guatemala a tọọrọ otu nwanyị dị afọ 84 nọ n’oche nkwagharị ma jichie ya ruo ọnwa abụọ .
(trg)="8"> Na Rio de Janeiro , ndị na - eme mpụ n’okporo ámá na - atọrọ ndị mmadụ kpọmkwem n’okporo ámá , na - ekwu mgbe ụfọdụ ka e nye ha nanị $ 100 dị ka ihe mgbapụta .
(trg)="9"> Ọbụna ụmụ anụmanụ eyighị ka ha nweere onwe ha .
(trg)="10"> Ọtụtụ afọ gara aga , ụfọdụ ndị omempụ nwere anya ike na Thailand tọọrọ otu enyí dị tọn isii n’arọ bụ́ nke nọ na - arụ ọrụ ma kwuo ka e nye ha $ 1,500 dị ka ihe mgbapụta .
(trg)="11"> A sịrị na òtù ndị omempụ ndị nọ na Mexico na - agba ndị batara ọhụrụ n’òtù ha ume iji anụ ndị e ji mere enyi na anụ ụlọ na - amụgharị ihe iji nweta ahụmahụ zuru ezu tupu ha ebido ezigbo ọrụ .
(trg)="12"> N’oge gara aga , ndị ntọ na - edekarị ndị bara ọgaranya , ma ụbọchị agbanweela .
(trg)="13"> Otu akụkọ sitere n’aka ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ́ Reuters na - ekwu , sị : “ A na - atọrọzi ndị mmadụ kwa ụbọchị na Guatemala , bụ́ ebe ndị mmadụ ji oké mmasị na - echeta nnọọ oge ndị gara aga mgbe ihe ka mma , mgbe ndị na - emegide ọchịchị na - ede nanị ndị ọchụ ntá ego ole na ole bara ọgaranya .
(trg)="14"> Ugbu a ma ọgaranya ma ogbenye , ma nwata ma okenye , bụụrụ òtù ndị ntọ anụ oriri . ”
(trg)="15"> A na - akọsakarị ntọrọ nke ndị a ma ama n’usoro mgbasa ozi n’ụzọ sara mbara , ma a na - ahụ maka ihe ka ọtụtụ ná ntọrọ ndị ọzọ n’akọsaghị ha .
(trg)="16"> N’eziokwu , n’ihi ọtụtụ ihe , mba dị iche iche “ enwekebeghị ihe mere ha ga - eji kpọsaa nsogbu banyere ịtọrọ mmadụ . ”
(trg)="17"> Isiokwu na - esonụ ga - atụle ọtụtụ n’ime ihe ndị dị otú ahụ .
(trg)="18"> [ Map dị na peeji 13 ]
(trg)="19"> ( Ị chọọ ịhụ ebe e sere map a , gaa n’akwụkwọ a nke e biri ebi )
(trg)="21"> Ebe a na - atọrọ ihe dị ka mmadụ 2,000 kwa afọ , a kpọwo ịtọrọ mmadụ “ obere achụmnta ego . ”
(trg)="23"> Inshọransị maka ịtọrọ mmadụ bụ́ nke a na - agbata n’ụlọ ọrụ Lloyd’s of London ejiriwo pasent 50 mụbaa kwa afọ kemgbe 1990 .
(trg)="25"> Nanị n’ógbè Caucasus dị n’ebe ndịda Russia , ọnụ ọgụgụ ndị a tọọrọ mụbara site na 272 na 1996 ruo 1,500 na 1998 .
(trg)="27"> Dị ka magazin bụ́ “ Asiaweek ” si kwuo , “ Philippines bụ ma eleghị anya ebe a kasị atọrọ mmadụ n’Esia . ”
(trg)="28"> Ihe karịrị òtù ndị ntọ 40 a haziri ahazi dị n’ebe ahụ .
(trg)="30"> A kọrọ na ndị ntọ nọ n’ebe ahụ nwetara ijeri $ 1.2 n’otu afọ dị ka ego mgbapụta .
(trg)="32"> N’afọ ndị na - adịbeghị anya gara aga , a nọwo na - atọrọ ọtụtụ puku mmadụ kwa afọ .
(trg)="33"> Na May 1999 , ndị na - enupụrụ ọchịchị isi tọọrọ otu narị ndị parish n’oge a na - edo Mas .
(trg)="34"> [ Ebe E Si Nweta Foto ]
(trg)="1"> Ịtọrọ Mmadụ — Ihe Iyi Egwu E Ji Achụ Ego
(trg)="2"> “ ỊTỌRỌ mmadụ adịghị ka ime mpụ metụtara ihe onwunwe .
(trg)="3"> Ọ bụ mmeso aghụghọ , nke obi ọjọọ na nke enweghị ọmịiko megide njikọ bụ́ isi nke ụmụ mmadụ , bụ́ ezinụlọ ” ka Mark Bles na - ekwu , n’akwụkwọ ya bụ́ The Kidnap Business .
(trg)="4"> Ịtọrọ mmadụ na - akpatara ndị òtù ezinụlọ mkpaghasị uche .
(trg)="5"> Kwa minit na kwa awa , ha nwetụ olileanya ha enwetụ obi nkoropụ ka mmetụta obi amamikpe , ịkpọasị , na amaghị ihe a ga - eme na - enye ha nsogbu .
(trg)="6"> Ahụmahụ ọjọọ ahụ pụrụ ịdịgide ruo ọtụtụ ụbọchị , izu , ọnwa ma ọ bụ , mgbe ụfọdụ , ọbụna ọtụtụ afọ .
(trg)="7"> N’oké ọchịchọ ha na - achọ ego , ndị ntọ na - eji mmetụta nke ezinụlọ eme ihe .
(trg)="8"> Otu ìgwè ndị ntọ manyere onye ha tọọrọ ide ihe ndị na - esonụ n’akwụkwọ ozi o degaara ụlọ ọrụ mgbasa ozi : “ Agwara m Ụlọ Ọrụ Mgbasa Ozi ka ha bipụta ihe a n’ebe nile ma ọ bụrụ na alọghachighị m ka ụta wee dịrị ndị tọọrọ m ma dịkwara ezinụlọ m bụ́ ndị gosiri na ego dị ha mkpa karịa ka m dị ha . ”
(trg)="9"> Ndị ntọ nọ n’Itali amanyewo ndị mmadụ iweta ego mgbapụta site n’ibepụta ụfọdụ akụkụ ahụ ma zigara ha ndị ikwu onye ahụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ TV .
(trg)="10"> Otu onye ntọ na Mexico ọbụna tara ndị ọ tọọrọ ahụhụ ka o so ezinụlọ ha na - ekwu ọnụ ahịa iji gbapụta ha .
(trg)="11"> Ndị ntọ ụfọdụ , n’aka nke ọzọ , na - agbalị inweta ihu ọma nke ndị ha tọọrọ .
(trg)="12"> Dị ka ihe atụ , na Philippines e debere otu onye ọchụ ntá ego a tọọrọ ná nnukwu họtel dị na Manila , bụ́ ebe ndị tọọrọ ya nọ nye ya mmanya ma na - akpọtara ya ndị akwụna ruo mgbe a kwụrụ ihe mgbapụta ya .
(trg)="13"> Otú ọ dị , a na - akpọchibido ihe ka ọtụtụ ná ndị a na - atọrọ n’ajụghị ase banyere mkpa anụ ahụ ma ọ bụ nke ịdị ọcha ha .
(trg)="14"> A na - emekpọ ọtụtụ ọnụ .
(trg)="15"> Otú o sina dị , onye a tọọrọ aghaghị ịnọ n’egwu mgbe nile ka ọ na - eche ihe ga - eme ya .
(trg)="16"> Ịnagide Mkpasasị Uche Ọ Na - akpata
(trg)="17"> Ọbụna mgbe a tọhapụsịrị ndị a tọọrọ , ha pụrụ ịnọgide na - enwe mmetụta ọjọọ .
(trg)="18"> Otu nọọsụ bụ́ onye Sweden nke a tọọrọ na Somalia kwupụtara echiche a : “ Otu ihe dị mkpa karịa ihe ọ bụla ọzọ .
(trg)="19"> Ị ghaghị isoro ndị enyi na ndị ikwu gị kwurịta okwu ma nweta enyemaka onye ọkachamara ma ọ bụrụ na ọ dị gị mkpa . ”
(trg)="21"> N’ọtụtụ nnọkọ na - ewe mkpirikpi oge , ndị ahụ a tọọrọ na - akọwa ahụmahụ ha site n’enyemaka nke onye ọkachamara tupu ha ezute ezinụlọ ha ma maliteghachi ibi ndụ otú ha na - ebibu .
(trg)="22"> “ Ọgwụgwọ e nyere n’oge na - adịghị anya a tọhapụsịrị mmadụ na - ebelata ihe ize ndụ nke inwe mmerụ ahụ na - adịgide adịgide , ” ka Rigmor Gillberg na - ekwu , bụ́ ọkachamara n’ihe banyere ịgwọ ọrịa n’ejighị ọgwụ mgbe e nwere ọdachi bụ́ onye nọ n’òtù Red Cross .
(trg)="23"> Ihe Ndị Ọzọ Ọ Na - akpata
(trg)="24"> Ọ bụghị nanị ndị a tọọrọ na ezinụlọ ha ka ịtọrọ mmadụ na - emetụta .
(trg)="25"> Ụjọ ịbụ onye a tọọrọ pụrụ ime ka ime njem nleta kwụsị ma belata atụmatụ achụmnta ego ; ọ na - akpatakwa mmetụta nke anọghị ná nchebe nke ọha mmadụ .
(trg)="26"> N’ime ọnwa ole na ole nanị na 1997 , ụlọ ọrụ isii nwere ndị ọrụ ná mba ndị ọzọ kwapụrụ na Philippines n’ihi iyi egwu nke ịtọrọ mmadụ .
(trg)="27"> Otu nwanyị bụ́ onye Philippines na - arụrụ òtù a na - akpọ Ụmụ Amaala Na - alụso Mpụ Ọgụ ọrụ kwuru , sị : “ Ndụ anyị jupụtara n’ahụmahụ ọjọọ . ”
(trg)="28"> Otu isiokwu pụtara na magazin bụ́ The Arizona Republic na - ekwu , sị : “ N’etiti ndị isi ọrụ nọ na Mexico , ụjọ ịbụ ndị a tọọrọ fọrọ nke nta ka ọ gabiga ókè , o nwekwara ezi ihe kpatara ya . ”
(trg)="29"> Magazin Brazil bụ́ Veja na - akọ na ndị ntọ na ndị ohi anọchiwo anụ ọjọọ ná nrọ ọjọọ nke ụmụaka ndị Brazil .
(trg)="30"> Na Taiwan , a na - akụzi otú e si ezere ịbụ onye a tọọrọ n’ụlọ akwụkwọ , na United States kwa , a rụnyewo kamera ndị e ji eche nche n’ụlọ akwụkwọ ọta akara dị iche iche iji gbochie ịtọrọ mmadụ .
(trg)="31"> Ahịa Uru Nye Ndị Ọkà n’Ihe Banyere Iche Nche
(trg)="32"> Ịrị elu nke ịtọrọ mmadụ na okwu ndị chọrọ nlezianya na - eso ya emewo ka ụlọ ọrụ ndị na - ahụ maka iche ndị mmadụ nche nwee uru ahịa .
(trg)="33"> N’obodo ukwu Rio de Janeiro dị na Brazil , e nwere ihe karịrị ụdị ụlọ ọrụ 500 dị otú ahụ , na - enweta ijeri $ 1.8 .
(trg)="34"> Ọnụ ọgụgụ na - arị elu nke ụlọ ọrụ ndị na - ahụ maka iche nche bụ́ ndị nwere ndị ọrụ ná mba ndị ọzọ na - akụzi ụzọ isi gbochie ịbụ onye a tọọrọ , na - ebipụta akụkọ banyere ebe ndị dị ize ndụ , na - ekwukwa okwu ihe mgbapụta .
(trg)="35"> Ha na - enye ezinụlọ na ụlọ ọrụ ndụmọdụ , na - akụziri ha usoro ndị ntọ ji eme ihe ma na - enyere ha aka ịnagide mkpaghasị mmetụta uche ha .
(trg)="36"> Ụfọdụ ụlọ ọrụ na - agbalị ọbụna ijide ndị ntọ ahụ ma nataghachi ego mgbapụta ahụ mgbe ha tọhapụsịrị onye ha ji eji .
(trg)="37"> Otú ọ dị , ha adịghị arụ ọrụ n’efu .
(trg)="38"> N’agbanyeghị mgbalị ndị dị otú ahụ , ịtọrọ mmadụ na - amụba n’ọtụtụ ala .
(trg)="39"> N’ikwu banyere ọnọdụ ahụ na Latin America , Richard Johnson , bụ́ osote onyeisi ụlọ ọrụ Seitlin & Company na - ekwu , sị : “ Ihe mmadụ nile na - atụ anya ya bụ na ịtọrọ mmadụ ga - amụba . ”
(trg)="40"> Ihe Ndị Kpatara Mmụba Ahụ
(trg)="41"> Ndị ọkachamara na - ekwu ọtụtụ ihe mere o ji mụbaa n’oge a .
(trg)="42"> Ajọ ọnọdụ akụ̀ na ụba dị n’ebe ụfọdụ bụ otu .
(trg)="43"> Otu onye ọrụ enyemaka nọ n’obodo Nal’chik , Russia , kwuru , sị : “ Ụzọ kasị mma isi nweta ego bụ site n’ụzọ ọjọọ a , ịtọrọ mmadụ . ”
(trg)="44"> N’ụfọdụ mba ndị dịbu na Soviet Union , a sịrị na e ji ego e nwetara n’ịtọrọ mmadụ elekọta usuu ndị agha nke ndị ọchịagha obodo .
(trg)="45"> Ọtụtụ ndị na - emewanye njem maka achụmnta ego ma ọ bụ maka njem nleta karịa ka ọ dịbu , si otú a na - emepere ndị ntọ na - achọ ndị ha ga - akpara aka ohere ọzọ .
(trg)="46"> Ọnụ ọgụgụ ndị si mba ọzọ a na - atọrọ amụbawo okpukpu abụọ n’ime afọ ise .
(trg)="47"> N’agbata afọ 1991 na 1997 , a tọọrọ ndị na - eme njem nleta n’ihe dị ka ala 26 .
(trg)="48"> Olee ebe ndị ntọ a si ?
(trg)="49"> Agha ụfọdụ akwụsịwala , na - eme ka ndị bụbu soja ghara inwe ọrụ , gharakwa inwe ego .
(trg)="50"> Ndị a nwere nkà nile dị mkpa iji malite ọrụ a na - enye ezigbo ego .
(trg)="51"> N’otu aka ahụ , iji usoro ndị dịkwu irè egbochi izu ohi n’ụlọ akụ̀ na ihe ndị e mere iji belata ahịa ọgwụ ọjọọ emewo ka ndị omekome malite ịtọrọ mmadụ dị ka ihe ga na - enyezi ha ego .
(trg)="52"> Mike Ackerman , bụ́ ọkachamara n’ihe banyere ịtọrọ mmadụ kọwara , sị : “ Ka anyị na - eme ka o sikwuo ike izuru ihe onwunwe n’ebe nile , otú ahụ ka ọ na - eme ka a na - ezuru ndị mmadụ . ”
(trg)="53"> Ịkpọsa ihe mgbapụta buru ibu pụkwara ịkpali ndị chọburu ịtọrọ mmadụ .
(trg)="54"> Nzube Ha Anaghị Abụcha Otu
(trg)="55"> Ihe ka n’ọtụtụ ndị ntọ chọrọ nanị ego .
(trg)="56"> Ihe mgbapụta ha na - ana na - adịgasị iche site na dollar ole na ole ruo nde $ 60 kasị elu bụ́ nke a kwụrụ iji gbapụta otu aka ji akụ̀ na Hong Kong bụ́ onye a na - atọhapụghị n’agbanyeghị ego e nyere .
(trg)="57"> N’aka nke ọzọ , ụfọdụ ndị ntọ ejiriwo maka ndị ha tọọrọ bụrụ ndị a ma ama , nweta ihe oriri , ọgwụ , redio , na ụgbọala tinyekwara ụlọ akwụkwọ ọhụrụ , ụzọ , na ụlọ ọgwụ .
(trg)="58"> A tọhapụrụ otu onyeisi a tọọrọ n’Esia mgbe e nyesịrị ndị ntọ ahụ uwe egwuregwu basketball na bọl ya .
(trg)="59"> Òtù ụfọdụ na - ejikwa ịtọrọ mmadụ achụpụ ma na - emenye ndị na - achụ nta ego na ndị nleta si mba ọzọ bịa egwu , iji kwụsị mmebi a na - emebi ala na ihe ndị sitere n’okike .
(trg)="60"> Ya mere nzube ha dị ọtụtụ , ụzọ e si eme ya dị ọtụtụ , ndị ga - atọrọ mmadụ ma ọ bụ ndị a ga - atọrọ dị ọtụtụ .
(trg)="61"> Ihe ngwọta ya ọ̀ dịkwa ọtụtụ otú ahụ ?
(trg)="62"> Olee ụfọdụ n’ime ha , hà pụkwara igbo mkpa ahụ ?
(trg)="63"> Tupu anyị azaa ajụjụ ndị dị otú ahụ , ka anyị tụlee ụfọdụ n’ime ihe ndị na - apụtaghị ìhè , bụ́ isi ihe ndị na - akpata mmụba nke ịtọrọ mmadụ .
(trg)="64"> [ Igbe dị na peeji nke 15 ]
(trg)="65"> Ọ Bụrụ na A Tọrọ Gị